Global fanavaozana rafitra - Qunfeng tsaina fitaovana Co., Ltd.
Qunfeng mahafantatra mpanjifa '
tinady tsara kokoa mifototra amin'ny angona lehibe maneran-tany.
Fikarohana sy fampandrosoana foibe
Nalaina avy amin'ny angon-drakitra lehibe mihoatra ny 8.000 mpanjifa ao amin'ny firenena sy ny faritra 110, Qunfeng no afaka manara-maso amin'ny tena andro tsena ny farany tahirin-kevitra mba ho fantatrareo izay customers'demand tsara kokoa.
Qunfeng dia nanangona ambony manam-pahaizana manokana ao an-trano sy any ivelany, nanangana 3 R & D foibe, ary nametraka feo stratejika fiaraha-miasa miaraka amin'ny maro malaza akademia sy ny R & D andrim-panjakana
Teknolojia zava-baovao no antoky ny fampandrosoana ny indostria, ary Qunfeng mahalala lavitra tsara ihany miovaova fampiasam-bola amin'ny teknolojia afaka mitarika ny orinasa ho fampandrosoana haingana. Amin'ny taona ny mikaroka sy Precipitation ka mitroka iraisam-pirenena mandroso ny teknolojia sy ny fanangonana toetra & hery wildly, QunFeng creats izao tontolo izao-kilasy tsaina fanaovana biriky-milina ny fananana ara-tsaina mahaleo tena zo.
Up ny presentQunfeng efa nahazo mihoatra ny 150 Patents, ary nandray anjara tamin'ny fandrafetana sy ny fanitsiana ny mihoatra ny 10-pirenena sy ny orinasa fitsipika.
Ny fanorenana voalohany-laboratoara ara-nofo any an-tsaha
Qunfeng no voalohany mba hanorina fanorenana-laboratoara ara-nofo any an-tsaha ary hadihadiana vokatra ny mpanjifa avy manerana izao tontolo izao, tsy vitan'ny hoe raikipohy manolotra toro-hevitra ihany koa manangona antontan-kevitra ho ampy fitaovana mifototra amin'ny evolisiona vokatra tinady.
Qunfeng laboratoara dia afaka customizing feo sy ny raikipohy azo itokisana ny vokatra mivaingana ho an'ny mpanjifa mifototra amin'ny toe-javatra samy hafa sy ny fangatahana mba anatin'ny masonkarena azo hahena amin'ny alalan'ny fanitsiana raikipohy.